Weerar dhinaca cirka oo ka dhacay Koonfurta Somaliya – AfmoNews
Weerar dhinaca cirka oo ka dhacay Koonfurta Somaliya
Weerar dhinaca cirka ah ayaa gelinkii dambe ee Arbacadii ka dhacay xarun ay maleeshiyada Al Shabaab ku leeyihiin Koonfurta Somaliya.
Duqaynta ayaa ka dhacday nawaaxiga deegaanka Buulo Falaay, oo ku yaala xuduudda kala qaybisa Gobolada Baay iyo Shabellaha Hoose.
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika (AFRICOM) ayaa xalay sheegay in duqaynta lagu burburiyay dhismahaasi, sidoo kalena lagu dilay mid ka mida dagaal-yahanada ururka.
Khamiistii hore duqayn ka dhacday deegaanka Saaxa-weyne ee Gobolka Baay waxaa lagu dilay hoggaamiye-yaal ka tirsanaa Al Shabaab, sida uu sheegay Taliska AFRICOM.
Duqaynta ka dhacday Buulo Falaay waxay ku soo aadaysaa, maalin ka dib markii Wasiirka Difaaca Somaliya, Xasan Xuseen Xaaji uu Saraakiisha Mareykanka ee dalka ku sugan ugu baaqay in la dardargeliyo duqaymaha ka dhanka ah Shabaab.
Shabaabka hubeysan ee dalka ka dagaalama ayaa dagaal kula jira Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Ciidanka Nabad Ilaalinta ee Midowga Afrika, oo joogitaankooda dalka ay si weyn uga soo horjeedaan.